Dib u Dhac Laga Baqayo Inuu ku Yimaado Doorashada
Sunday, May 19, 2013 Wakhtiga Geeska Afrika 01:26
Guddiga farsamada ee soo xulista xubnaha baarlamanka ayaa sheegey in ay dhici karto in waqtigu uu ciriiri noqdo marka la gaaro doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo ay hada ka harsan tahay 6 cisho oo kaliya, iyagoo ku sababeeyey in ay horey u jireen dib u dhacyo.
Waxaa kaloo jirta Cabsi laga qabo inaan la dhammaystiri kairn xilliga looga baxayo ku meelgaraka ah ayaa ka jirta Muqdishu.
Guddoomiyaha gudiga farsamada ee soo xulista baarlamanka Xaliimo Ismaaciil Ibraahim “Xaliimo Yarey” ayaa uga warantay Falastin Axmed Iman oo VOAda ka tirsan.
Codka Xaliimo Yaret Halkan hoose ka dhageyso
Dhinaca kalena, Xogyahaya Guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki Moon ayaa war saxaafadeed uu ka soo saaray xafiiskiisa ku sheegay inuu ka walaacsan yahay dib u dhac ku yimaada soo xulidda baarlamaanka, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in hoggaamiyayaasha Soomaalidu ay ka shaqeeyana danaha shacabkooda.
Cabsi ah inaan la dhammaystiri kairn xilliga looga baxayo ku meelgaraka ah ayaa ka jirta Muqdishu.
Xassan Xundubey oo madax ka ah urur la yirahdo New Somali Forum oo ka shaqeeya wacyigelinta arimaha bulshada iyo siyaasadda, ayaa uga waramay wariyaha VOAda Maxamed Colaad Xassan.
Codka Xasan Xundubey Halkan ka dhageyso